The 5 kasị mma ngwa na-eme ka bọl lineups maka gam akporo | Androidsis
Aaron Rivas | 28/11/2021 01:03 | Ngwa gam akporo, Mobiles
Egwuregwu kacha elere anya na nke na-atọ ụtọ n'ụwa, n'ihe gbasara ndị na-akwado ya, ewu ewu na mgbasa ozi, bụ football, aka ala. N'ihi nke a, ọtụtụ nde ndị na-eso ịdọ aka ná ntị a na-achọ ụdị ozi ọ bụla metụtara ndị otu ha kacha amasị ha, dị ka ahịrị ha, nke ndị egwuregwu bụ ndị ga-egwu egwuregwu n'ime ụbọchị ndị na-esonụ na otú ha ga-esi dị. ahaziri. E nwekwara ọtụtụ ndị na-eme ha, ma ọ bụ n'ihi na ha bụ teknuzu director nke otu ma ọ bụ nanị na-achọ ịhazi egwuregwu; Ọ bụrụ na nke ikpeazụ bụ ikpe, ebe a, anyị na-egosi gị ngwa kacha mma iji mee ka usoro egwuregwu bọọlụ.
Oge a anyị na-ewetara gị ndepụta nke anyị na-anakọta Ngwa 5 kacha mma iji mee ahịrị bọọlụ maka gam akporo. Ha niile bụ n'efu, n'otu oge ahụ, ha dị na Ụlọ Ahịa Google Play.
N'okpuru, ị ga-ahụ usoro nke kacha mma enyi-eme ngwa maka gam akporo smartphones. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama, dị ka anyị na-eme mgbe niile, na ndị niile ị ga-ahụ na mkpokọta akwụkwọ a bụ n'efu. Ya mere, ị gaghị akpa ụdị ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile.
1 Bọọlụ bọọlụ Tactic
2 Onye nkuzi TacticalPad Whiteboard
3 LineApp - Nhazi bọọlụ, ahịrị otu
4 Onye nrụpụta bọọlụ Squad
5 Mpempe bọọlụ bọọlụ
Bọọlụ bọọlụ Tactic
Nke ahụ bụ naanị iji akara na echiche na-akọwa ihe niile dị n'uche. Ya na Bọọlụ bọọlụ Tactic ị ga-enweta kpọmkwem ihe aha ngwa ahụ na-egosi, nke bụ bọọdụ iji mepụta usoro na usoro egwuregwu n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa.
Mepụta ahịrị n'ime sekọnd ka onye njikwa asọmpi dị elu. Ejila onwe gị mgbagwoju anya, mee ka ndị egwuregwu gị nwee mgbagwoju anya. Gosi ha ka ị chọrọ ka ha na-egwu n'ọhịa ka ha wee merie n'egwuregwu ahụ wee si otú ahụ rịgoro bọọdụ ndị isi. Ọ na-arụkwa ọrụ maka egwuregwu okporo ámá na egwuregwu maka ntụrụndụ.
Na Soccer Tactical Slate kwa ị nwere ike kaa akara na ngwa mmegharị ịme; Ọ bụghị naanị na ị nwere ike ịchọta ndị egwuregwu nwere aha na agba ha na tebụl, ma ị nwekwara ike iji akụ dị iche iche mee ka ihe omume kwesịrị ime na otu esi eme ya. Ma ọ bụ na ọ nwere interface ndezi nke ị nwere ike ịhọrọ n'etiti pensụl, akụ dị iche iche na nchicha iji megharịa omume ahụ, ma ọ bụ họrọ bọọlụ iji tinye ya na bọọdụ n'ụdị eserese na ihe atụ. N'ebe ahụ ị nwekwara ike dee aha nke tactic na-echekwa ya maka emechaa. N'aka nke ya, ị nwere ike ihichapụ ya ma ọ bụ hazie ya ka ọ masịrị gị ma ọ bụrụ na-ịchọrọ.
Ị nwekwara ike ịhọrọ akụkụ nke egwuregwu bọọlụ ị ga-eji gosi usoro gị, ma ọ bụrụ na ọkara nke ya, akụkụ nke nkuku ma ọ bụ ntaramahụhụ, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ ubi dum. See ihe ọ bụla ịchọrọ na bọọdụ, site na X na ihe oyiyi ruo n'ọnyá na ndị egwuregwu megide; na nke ahụ bụ akụkụ nke echiche gị dị ka DT.
Onye nkuzi TacticalPad Whiteboard
Ngwa ọzọ magburu onwe ya iji mee ka ahịrị bọọlụ bụ TacticalPad Trainer Board. Ma ọ bụ na ngwa a nwere ọtụtụ ngwaọrụ iji weghara echiche, atụmatụ na usoro mmegharị, ma ọgụ na nchekwa.
Ozuru iji bọọdụ ọcha nkịtị; ha na-abụkarị ndị buru ibu ma na-abaghị uru. Ọ dịghị ihe dị ka ngwa dị ka nke a, nke na-enye gị ohere ngwa ngwa na ngwa ngwa dezie ihe niile ịchọrọ ịkụziri ndị egwuregwu gị.
Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị bụ onye nchịkwa, onye inyeaka, onye nyocha, ma ọ bụ ọbụna onye na-anụ ọkụ n'obi na bọlbụ na onye nduzi nka nka. Ngwa a, Na ya edezi interface na dị iche iche ngwá ọrụ dị, ọ na-enye gị ohere ise ihe ọ bụla na-amasị gị na bọl ubi. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịkọwapụta nke ọma nke egwuregwu ahụ nke ịchọrọ ka otu gị mejuputa ma na nchekwa na ọgụ, iji merie egwuregwu ahụ ma merie otu ndị na-emegide ya.
Developer: Ngwa ngwa Temma - TacticalPad
LineApp - Nhazi bọọlụ, ahịrị otu
Ngwa ọzọ a na-eji eme ahịrị bọọlụ ma bụrụ otu n'ime ihe kachasị mfe na nchikota a bụ LineApp, ngwá ọrụ na-enye gị ohere iduzi otu gị site na bọọdụ ebe ị nwere ike idobe ndị egwuregwu gị dịka ịchọrọ.
LineApp na-enye gị ohere ịhọrọ uwe otu gị wee dezie ọnọdụ ahụ mgbe ọ bụla ịchọrọ. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịkọwara ndị egwuregwu gị otu na ebe ịchọrọ ka ha nọrọ na egwuregwu egwuregwu oge niile. N'aka nke ya, otu n'ime njirimara kachasị mma ọ nwere bụ ikike ịkekọrịta ndebiri gị site na WhatsApp, email na netwọk mmekọrịta ngwa ngwa na ngwa ngwa. N'ụzọ dị otu a, ị nwere ike kekọrịta atụmatụ gị, egwu egwu, ụzọ gị na usoro gị site n'ebe dị anya.
Ma ọ bụghị, ngwa ahụ na-enye gị ohere ịhọrọ ọnụọgụ ndị egwuregwu, yana aha nke ọ bụla. O nwekwara akara ngosi, emojis, ọkọlọtọ na ihe ndị ọzọ ị nwere ike itinye na bọọdụ ahụ, iji mee ka ihe niile bụrụ nkọwa na nkọwa.
Onye nrụpụta bọọlụ Squad
Ngwa nke anọ iji mee ahịrị bọọlụ na gam akporo na ndepụta a bụ Onye nrụpụta bọọlụ Squad, nke na-emezu otu isi ọrụ dị ka ndị gara aga ma nweekwa bọọdụ ma ọ bụ bọọdụ egwuregwu bọọlụ nke enwere ike dezie ndị egwuregwu, iji gosi ọnọdụ ndị a chọrọ maka egwuregwu ọ bụla, yabụ na ọ bụ ihe ọzọ. nhọrọ kacha mma maka ndị nkuzi, ndị njikwa, ndị na-enyere aka na onye ọ bụla nwere ma chọọ iduzi otu, ọ bụrụ ọkachamara ma ọ bụ onye ga-anọpụ iche ma nwee ọchị na egwuregwu na ndị enyi.
Mpempe bọọlụ bọọlụ
Iji mechaa nchịkọta a nke ngwa kachasị mma maka ịme egwuregwu bọọlụ, anyị nwere Mpempe bọọlụ bọọlụ. Ngwa a nwere ọnụ ọgụgụ, akara ngosi, bọọlụ na ihe ndị ọzọ dị na ngalaba ndezi nke bọọdụ ahụ ma nye gị ohere ịkọwa atụmatụ na usoro egwuregwu ahụ. Na ngwa, na ihe ndị ọzọ, ị nwekwara ike ịgbanwe ndabere nke ubi.
Developer: Ndị nkuzi niile
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa 5 kacha mma iji mee ahịrị bọọlụ maka gam akporo